ताइटिंगर - फ्रान्सेली अभिजात वर्गको शैम्पेन: तस्बिर, वर्णन, समीक्षा
कुनै पनि छैन इन्टरटेन्ट रिसेप्शन वा महंगी भोज संसारको नामको साथ शैम्पेन बिना गर्दैन - ताइटिंगर। यो च्याम्पेन मा एक मात्र ब्रान्ड हो जो कि निजी पारिवारिक स्वामित्व मा छ र उच्च स्तर को स्पार्कलिंग शराब को बनाए राखन को लागि जारी राखयो, लगभग एक सय वर्ष पहिले स्थापित भयो।
शैम्पेन मा टाटिंगर को इतिहास
च्याम्पियन विन्स टेटिङरको व्यापारिक घर शैम्पेनमा सबैभन्दा पुरानो मध्ये एक हो। यसको उत्पत्ति इतिहास 1734 मा पुग्यो र अर्को नामसँग सम्बन्धित छ "चारनेअक्स" यसको संस्थापक जैक फर्नोनो पछि।
लगभग दुई सय वर्ष पछि, 1932 मा, वाइनरी अर्को फ्रान्सेली, पियरे टिटान्ग द्वारा खरीदाएको थियो। त्यस पछि, च्याम्पियन मदिराको इतिहासमा नयाँ युग सुरु हुन्छ - ताइटिङ ब्रान्ड देखिन्छ। यस वर्षदेखि, कम्पनी सक्रिय रूपमा बढ्दै गएको छ र विकास गरिएको छ।
1952 मा, स्पार्कलिंग शराबको पहिलो बोतल उत्पादन गरिएको थियो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको थियो, दुवै विशेषज्ञ आलोचकहरू र ताइटिंगर ब्रान्डका पेय प्रेमीहरू - च्याम्पेन कोम्टेसन चैंपेन ब्लेन्क डे ब्लान्न्समा। शीर्षकको पहिलो भाग शाब्दिक रूपमा "चैंपेनको गणना" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ र राजा नवरायर थिइवाउट चतुर्थको क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा विजेताको उत्पत्तिमा संकेत गर्दछ।
XIII शताब्दीमा पौराणिक कथाका अनुसार, तिनले क्रूसमा ल्याए, चर्डोनने विविधता को एक अंगूर, जसले आधुनिक शैंपेन को शुरु गर्यो। यो कृतज्ञतामा, आजको सबै बोतलहरूमा व्यापार चिन्ह Tettenge त्यहाँ ट्रुबोरोरको नाइट हो। यसको संरचना मा एक ही ताइटिंगर शैम्पेन एक प्रमुख नोट Chardonnay छ।
व्यापारिक घरको आधारबाट, उनी सबै परिवारको सम्पत्तीमा रहेका छन् यी सबै वर्ष। केवल 2005 मा Tettenge ब्रान्ड एक अमेरिकी कम्पनी द्वारा खरीदा थियो। तर एक वर्षपछि संस्थापकको पोताले निजी सम्पत्तिलाई फर्म फर्कायो, र आफ्नो दादाले व्यवसाय शुरुवात जारी राख्यो।
दाखिला र दाखरस उत्पादन
च्याम्पियनमा लगभग 300 हेक्टेयर भूमि चैंपेन हाउस Tettenge छ। उनको आधा पिनोट नोयर विविधताका दाखिला हुन्, वर्गको एक तिहाई चौर्डन हो, बाकी पाइन मिनियर हो। सबै एकत्रित अंगूर आफ्नो आफ्नै शैम्पेन उत्पादनमा जान्छ।
तर, दुर्भाग्यवश, काटिएको फसल कम्पनीको सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन। वार्षिक रूपमा, व्यापारिक घरले वर्षमा5लाख बोटहरू उत्पादन गर्दछ। यो धेरै छ, त्यसैले कम्पनीले साना उत्पादकहरूबाट अंगूर पनि किन्न सक्छ।
Taittinger को मुख्य सफलता उत्तम अंगूर किस्मों देखि उच्चतम गुणवत्ता को शैम्पेन हो। प्राकृतिक शराब सामग्रीमा कम्पनीले धेरै उच्च माग गर्दछ, तर अन्तिम परिणाम यसको लायक छ।
व्यापारिक घरको दायरामा अङ्गुरका विभिन्न किस्महरूबाट धेरै प्रकारका स्पार्कलिङ्ग च्याम्पियनहरू छन्। तल केवल केहि पदहरू छन्।
स्वाद रिजर्व-गिल्ट-स्ट्राको रंग र स्वादमा ताजा फलहरूको शहद टोन। संरचनामा चर्डोनने को हिस्सा 40% पुग्छ।
डेमी-सेक-पेल्ड सुनन अर्द्ध-शुष्क शैम्पेन एक हल्का आचरण स्वादको साथ। यो चमकदार शराब डेसर्टहरूको लागि एकदम सही छ।
Nocturn Rose - एक धनी गुलाबी रङ को महान सूम शैम्पेन। चकलेट डेसर्ट, ताजा पेस्ट्री र कन्फेक्शनरीको स्वादको साथ पूर्ण रूपमा अनुमोदन गर्दछ।
Prelude Grands Crus - dry champagne Chardonnay अंगूर र Pinot Noir बाट समान मात्रामा। रङ - पहेंलो पहेंलो, सिटरस फलको तीव्र पछि पछि।
ब्रुट प्रेस्जेजे गुलाब - एक नाजुक, मखमली, बेरी स्वाद संग गुलाबी शैम्पेन।
Les Folies de la Marquetterie एक फल स्वाद संग एक सूखी सफेद स्पार्कलिंग शराब छ। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा धेरै पुरस्कारहरूको विजेता हुनुहुन्छ।
ब्रट Millesime Taittinger - शैम्पेन हल्का पहेंलो, एक नाजुक गुलदस्ता मा सफेद फल र जामुन को एक खुशबू संग।
Comtes de Champagne Blanc de Blancs - हल्का पीले पहेंलो सुखागे धेरै धेरै हावा बल्बहरुको साथ। एक तीव्र चिकनी स्वाद र अमीर पछिस्टस्ट छ। ओक बैरलमा उमेरको शैम्पेन अवधि - 10 बर्ष सम्म। स्पार्कलिंग शराब को रचना - 100% Chardonnay।
Comtes de Champagne Rose - क्रेनबेरी र नारंगी र दालचीनी र टकसाल को मसालेदार नोटहरु को स्वाद संग समृद्ध गुलाबी र बैंगनी रंग को एक चमकदार वाइन।
सायद तपाईंले यस्तो मानिस फेला पार्न सक्नुहुनेछ जसले टिटिन्ग च्याम्पेनको प्रयास गरेपछि बेपत्ता भएको थियो। खरीददारहरू केवल मूल्यमा असन्तुष्ट छन्। कुलीन स्पार्कलिंग शराब एक महान् उपचार हो।
Taittinger - Champagne, जसको तस्बिर माथि प्रस्तुत गरिएको छ, मानिसहरूको स्वादको यस्तो समीक्षा प्राप्त:
यो सबै भन्दा राम्रो स्पार्कलिंग शराब हो, जुन सबै अवस्थित छ;
फूल र फलहरु को सुगंध नोट;
लेबल र बोतलबाट सबै चीजहरूमा गुण पेय आफैको स्वादमा।
च्याम्पियन टेटिङले एक पटक विश्वकपलाई पनि असर पारेको छ। समेत निकोता ख्रुश्चेव उनीहरूको स्वादको साथ खुसी थिए।
Taittinger उत्पादनका लागि मूल्यहरू
Tettenge व्यापारिक घरको उत्पादन उच्चतम मूल्य कोटि हो, तर यो अझै पनि प्रयास गर्न लायक छ। साथै, स्पार्कलिंग मदिराहरूको सम्पूर्ण दायरामा, तपाईंले सस्ती विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ। Taittinger उत्पादनको मूल्य कति हुन्छ?
सर्वश्रेष्ठ गुण Comtes de Champagne Blanc de Blancs को शैंपेन मा मूल्य हरेक बोतल 17 हजार रबल्स मा सेट गरिएको छ। अझ धेरै महँगो स्पार्कलिंग शराब कम्ट्स डे च्याम्पेन गुलाब - एक बोतलको लागि 25 हजार रूबल हुन्छ। यो शैम्पेन सबै खर्च गर्न सक्दैन।
ब्रुट रिजर्व र नोन्टर्नको स्पार्कलिंग मदिराहरू द्वारा एक थप पहुँचयोग्य विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ। यस शैम्पेन को एक बोतल 5-6 हजार रूबल खर्च हुनेछ। एक मानक 750 मिलीलीटर कन्टेनर को अतिरिक्त, कम्पनीले 375 मिलीलीटर स्पार्कलिंग शराब उत्पादन गर्दछ। ब्रुट रिजर्व को एक यस्तो बोतल को मूल्य3हजार रूबल हुन्छ।
Champagne Taittinger एक स्पार्कलिंग शराब छ जसको आफ्नै अद्वितीय शैली छ। केवल उहाँले सबै भन्दा आलोचक आलोचकों को लागि पनि अविस्मरणीय पेय को स्वाद बनाउँछ।
लिकर Xuxu - स्वर्गबाट एक चुम्बन
सिग्नेक "रिचर्ड हेनेसी": ब्रान्डको इतिहास र उत्पादनको बारेमा केही जानकारी
पौध र फूलहरु को लागि उर्वरक को रूप मा कफ मैदान: समीक्षा
गठिया कस्तो व्यवहार गर्ने?
वेब-स्टूडियो: दर्जा, साइटहरु को निर्माण र प्रचार को बारे मा, समीक्षाहरु
ल्यापटप ASUS N551JM: मोडेल र समीक्षा को विशेषताहरु